IHE Ị GA-EME MGBE NJEHIE CHROME: NJIKỌ GỊ ADỊGHỊ ECHEBE - GOOGLE CHROME - 2019
Windows na - eme ihe n 'msgcp110.dll mgbe faịlụ ga - apụ na usoro. Nke a nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe; OS anaghị ahụ ọbá akwụkwọ ma ọ bụ na ọ na-efu efu. Mgbe ị na-etinye ihe omume ma ọ bụ egwuregwu na-enweghị ikikere, a na-ebudata faịlụ na kọmputa nke dochie ma ọ bụ melite msvcp110.dll.
Iji kpochapụ nsogbu na msvcp110.dll, ịnwere ike ịnwale ọtụtụ nhọrọ. Jiri mmemme pụrụ iche, budata ngwugwu Visual C ++ 2012 ma ọ bụ wụnye faịlụ site na saịtị pụrụ iche. Tụlee nke ọ bụla na nkọwa zuru ezu.
Usoro nke 1: Mmemme DLL-Files.com
Usoro a nwere nchekwa data nke nwere ọtụtụ faịlụ DLL. Ọ nwere ike inyere gị aka na ngwọta nke nsogbu nke enweghị msvcp110.dll.
Iji jiri ya wụnye ọbá akwụkwọ, ịkwesịrị ime usoro ndị a:
Na igbe ọchụchọ, tinye "msvcp110.dll".
Jiri bọtịnụ "Mee nchọpụta DLL."
Ọzọ, pịa aha faịlụ ahụ.
Push bọtịnụ "Wụnye".
Emeela, msvcp110.dll arụnyere na usoro.
Usoro ihe omume ahụ nwere nlele ọzọ ebe a kpaliri onye ọrụ ịhọrọ nsụgharị dị iche iche nke ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ rịọrọ maka ụdị mbipute nke msvcp110.dll, ị nwere ike ịchọta ya site na ịgbanwe usoro ihe omume a. Iji họrọ faịlụ achọrọ, mee ihe ndị a:
Debe onye ahịa ahụ na anya pụrụ iche.
Họrọ ụdị mbipute nke msvcp110.dll ma jiri bọtịnụ ahụ "Họrọ nsụgharị".
A ga-akpọrọ gị na windo na ntọala ndị ọrụ dị elu. N'ebe a, anyị na-esetịpụ ihe ndị na-esonụ:
Kọọ ụzọ iji wụnye msvcp110.dll.
Ọzọ, pịa "Wụnye Ugbu a".
Emeela, a na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ ahụ na usoro.
Usoro 2: Anya Studio C ++ ngwugwu maka Visual Studio 2012
Microsoft Visual C ++ 2012 na-akwalite akụkụ niile nke gburugburu ebe obibi ya nke achọrọ iji ọsọ ngwa ngwa mepụtara ya. Iji dozie nsogbu ahụ na msvcp110.dll, ọ ga-ezu iji budata ma wụnye ngwugwu a. Usoro ihe omume ahụ ga-edepụta faịlụ dị mkpa na nchekwa na nchekwa na nchekwa. Enweghị ihe omume ọ bụla a ga-achọ.
Download Visual C ++ maka Visual Studio 2012 ngwugwu site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Na ibe ebudata, mee ihe ndị a:
Họrọ asụsụ Windows gị.
Jiri bọtịnụ "Download".
Ọzọ ị ga-achọ ịhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ikpe gị. A na-enye ha 2 - otu maka 32-bit, na nke abụọ - maka Windows 64-bit. Iji chọpụta onye nke dabara, pịa "Kọmputa" pịa nri ma gaa "Njirimara". A ga-akpọrọ gị na windo na paramọrụ OS, ebe e gosipụtara ihe omimi.
Họrọ nhọrọ x86 maka usoro 32-bit ma ọ bụ x64 maka otu 64-bit.
Mgbe nbudata zuru ezu, malite faịlụ a ebudatara. Ọzọ ị ga - achọ:
Emeela, faịlụ msvcp110.dll ugbu a na usoro ahụ, njehie ya na ya ekwesịghịzi ime.
O kwesiri iburu n'uche na oburu na i nwere ngwa ngwa Microsoft Windows C ++ Redistributable, o nwere ike igbochi gi ka i malite nhazi nke ngwugwu 2012. N'okwu a, ị ga-ewepụ ngwugwu ahụ site na usoro ahụ, na ụzọ mbụ, site na "Ogwe njikwa", na mgbe nke ahụ wụnye version 2012.
Microsoft Visual C ++ Redistributable bụghị mgbe niile Ẹkot nnọchi maka nsụgharị mbụ, ya mere, mgbe ụfọdụ ị ga-arụnye ochie nsụgharị.
Usoro 3: Download msvcp110.dll
Ị nwere ike iwunye msvcp110.dll site na ịpị ya na ndekọ ahụ:
mgbe nbudata n'ọbá akwụkwọ. E nwere saịtị ebe a ga-eme ya n'efu.
Ekwesiri ighota na uzo ozo nwere ike di iche; ọ bụrụ na ị nwere Windows XP, Windows 7, Windows 8 ma ọ bụ Windows 10, mgbe ahụ, olee otu na ebe ị ga-esi wụpụta ụlọ akwụkwọ, ị nwere ike ịmụta site na isiokwu a. Na ịdebanye aha DLL, gụọ isiokwu anyị ọzọ. Emekarị ọ dịghị mkpa ịdebanye faịlụ a; Windows onwe ya na-eme nke a na-akpaghị aka, mana na mberede, nhọrọ a nwere ike ịdị mkpa.